Tobaneeyo Qof oo Lagu Dilay Daadad iyo Fatahaado Ku Dhuftay Wadanka Al-Maqrib.
Tuesday November 25, 2014 - 11:08:11 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadamada maqribul islaami laysku yiraahdo ayaa sheegaya in roobab mahiigaan ah iyo daad ku dhufteen halkaasi oo tobaneeyo qof ku dhinteen iyadoona lafilayo in musiibooyinka rabaaniga ah sii xoogeystaan.
Wadanka almaqrib oo kamid ah wadamada Maqribul islaami ayaa lagasoo sheegayaa dhibaatooyin dhan walba ah oo roobabka iyo daadku geysteen.
ku dhawaad 40 qof ayaa dhimatay tobaneeyo kalena waa lala’yahay kadib markii daadad baaxad leh ay ku dhufteen gobolka Kuleym ee dhaca Koonfurta wadanka Almaqrib.
Xukuumadda daaquudka almaqrib ayaa sheegtay in roobab mahiigaan ah oo saacado badan ka da’ayay magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ay sababeen in biya saa’id ah ay ku darsamaan wadiyada iyo togaga.
Mas’uul katirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa wakaaladda wararka almaqrib u sheegay in meydadka 16 qof oo biyaha daadadka ku maashoobay lasoo helay.
Biyaha xareedda oo hirarka badda lamoodo ayaa xaaqay tuulooyin iyo deegaanno dhaca Koonfurta,wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidanka gurmadka xukuumadda dabadhilifka oo adeegsanaya 333 doonyood iyo 130 gaadiidka biyaha dhax jibaaxa ayaa ku mashquulsan soo badbaadinta dadka lala’yahay.
Maamulayaasha wadankaasi ayaa ka cabsi qaba in dhibaatadu sii xoogeysato sababa laxariira Roobabka oo aan si kala joogsi laheyn u da’aya iyo Buundooyinka muhiimka ah oo ay daadka iyo fatahaaduhu jareen.
Diyaaradaha melleteriga qumaatiga ukaca ayaa la arkayay iyagoo dad lasoo badbaadiyay kasoo qaadaya fiinta sare ee buuraha oo dadku maciin bideen markii biyuhu waxwalba latageen.
Wakalaadda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in laba qof Faransiis ah iyagoo xaalad liidata ah lasoo badbaadiyay,dadka lagu dilay fatahaadaha iyo daadadka ayaa lafilayaa in ay gaaraan 45 qof sida ay sheegeen xarumaha caafimaadka.